तपाईंले पछिल्लो समय हेरेको चलचित्र कुन हो ? कस्तो लाग्यो ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः माघ ५, २०७६ - साप्ताहिक
नेपाली चलचित्र ‘पोइ पर्‍यो काले’ र हिन्दी चलचित्र ‘दबङ–३’ हेरेको थिएँ । दुवै चलचित्रले मन जिते ।
‘छ माया छपक्कै’ हेरेको थिएँ । चलचित्र राम्रो लाग्यो, त्यसैले हेरुन्जेल भरपुर मनोरञ्जन लिएँ ।
‘साली कसको भेनाको’ हेरेको थिएँ । त्यो चलचित्र निकै रमाइलो लाग्यो ।
‘छ माया छपक्कै’ हेरेको थिएँ । समग्रमा रमाइलो लाग्यो । तर, सोही ब्यानरमा पहिला बनेका चलचित्रजत्तिको राम्रो अलि लागेन ।
नेपाली चलचित्रमा ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ हेरेको थिएँ । यो चलचित्र निकै मन पर्‍यो । साथै केही दिन पहिले मात्र बलिउड चलचित्र ‘दबङ–३’ हेरेको थिएँ । ठीकै लाग्यो, अब चलचित्र ‘आमा’ को पर्खाइमा छु ।
गत वर्ष ‘प्रसाद’ हेरेको थिएँ । त्यो चलचित्रले मन छोयो ।
एउटा आर्टिकल लेख्नुपर्ने भएकाले जापानिज भाषाको ‘मानोगातरी’ हेरेको थिएँ, जुन हामीमध्ये धेरैले अत्यन्तै कम हेरेको चलचित्र हो । यो चलचित्र सन् १९८७ मा बफादार कुकुर हाचीको माथि बनेको थियो । पछि यसैको अंग्रेजी भर्सन सन् २००९ मा ‘हाची अ डग्स टेल’ बन्यो । हाचीको मानोगातरीले मालिकप्रतिको प्रेम, बफादारिता र अनन्त पर्खाइको पीडादायक कथा बोल्छ । मेरा उत्कृष्ट फिल्मको सूचीमा एउटा यो पनि पर्छ ।
‘घामड शेरे’ हेरेको थिएँ । ठीकै लाग्यो ।
‘माछा माछा’ हेरेको थिएँ । राम्रो लाग्यो ।
हिन्दी फिल्म ‘पतिपत्नी और वो’ हेरेकी थिएँ । एकदमै कमेडी लाग्यो । फिल्म हेरुन्जेल एकछिन पनि हाँसो रोकिएन ।
‘सरौतो’ हेरेको थिएँ, जसमा हरि हुमागाईंको काम मन पर्‍यो ।
‘जात्रैजात्रा’ हेरेको थिएँ । राम्रो लागेर दुई पटक हेरेँ ।
‘घामड शेरे’ हेरेको थिएँ । म निश्चल बस्नेतको फ्यान हो । तर, जति सोचेर गएको थिएँ त्यो पाइनँ ।
‘गुड न्यूज’ हेरेकी थिएँ । निकै राम्रो लाग्यो ।
मैले पछिलो पटक हिन्दी चलचित्र ‘बाला’ हेरेँ । अत्यन्तै राम्रो लाग्यो । चलचित्र हेरुन्जेल मात्र होइन, हलबाट बाहिर निस्किसकेपछि पनि चलचित्रले प्रभाव जमाइराख्यो ।
गुड न्युज हेरेको थिएँ । कमेडी रहेछ राम्रो लाग्यो ।
पछिल्लो पटक हलमा पुग्दा त्यहाँ कुनै नेपाली चलचित्र नभेटेपछि ‘गुड न्युज’ भन्ने बलिउड चलचित्र हेरेँ ।
मैले पछिल्लो पटक हेरेको चलचित्र ‘जात्रैजात्रा’ हो । चलचित्रमा मित्र कृष्ण भारद्वाजको पनि संगीत रहेकाले उहाँको ठाडो निर्देशनमा चलचित्र हेर्न पुगेको थिएँ । समग्रमा चलचित्र राम्रो लाग्यो ।
‘गुड न्यूज’ हेरेकी थिएँ । राम्रो लाग्यो ।
‘चच हुई’ हेरेको थिएँ । राम्रो होला भन्ठानेको थिएँ, तर खासै राम्रो लागेन ।
‘छ माया छपक्कै’ हेरेको थिएँ । राम्रो लाग्यो ।
अनुराग काश्यपको हिन्दी फिल्म ‘ग्याङ अफ वासेपुर— १ र २’ अनुराग काश्यपको हेरेको थिएँ । यी चलचित्र शताब्दीकै उत्कृष्ट चलचित्र मध्येका हुन् । चलचित्र हेरिसकेपछि कसरी चलचित्रलाई जीवन्त बनाउन सकेको होला भन्ने सोचेर म धेरै दिनसम्म नराम्ररी बिथोलिएको थिएँ ।
मैले पछिल्लो पटक हेरेको चलचित्र ‘प्रसाद’ हो । दिनेश राउतद्वारा निर्देशित तथा बिपिन कार्की, नम्रता श्रेष्ठ, निश्चल बस्नेतको मुख्य भूमिकामा तयार भएको उक्त चलचित्र समग्रमा उत्कृष्ट थियो । एउटा दम्पतीमा सन्तान नहुँदा जिन्दगीमा आउने उत्तारचढावलाई चलचित्रमा कुशल ढंगले उठान गरिएको छ ।
प्रकाशित :माघ ५, २०७६